Maleeshiyada hubaysan ee Al-Shabaab oo odayaal dhaqameed ku gowracday gobolka Mudug - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMaleeshiyada hubaysan ee Al-Shabaab oo odayaal dhaqameed ku gowracday gobolka Mudug
December 1, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Maleeshiyada hubaysan ee Al-Shabaab. [Sawirka: Al Jazeera]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Maleeshiyada hubaysan ee Al-Shabaab ayaa sideed oday dhaqameed gowracday sidoo kalena dishay ugu yaraan todobo qof kadib muran ka dhashay bixinta sakada, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Muranka oo isku badalay dagaal xoogan oo u dhaxeeyay dadka deegaanka iyo Al-Shabaab ayaa ka dhacay gobolka Mudug asbuucaan gudihiisa waxaana sidoo kale ku dhimatay maleeshiyaad Al-Shabaab ah.
“Al-Shabaab waxay nagu amartay in aan tobonaan xoolo ah u bixino sako, waana diidnay… taasaa bilowday dagaalka.. waxaanu dilnay 10 maleeshiyaad Al-Shabaab ah,” sidaa waxaa wakaalada wararka Reuters u sheegay Nuur Cabdulaahi oo kamid ah dadka deegaanka.
“Marka Al-Shabaab waxay isaga yimaadeen gobol walba waxayna nagu soo qaadeen weerar. Waxay gowraceen sideed oday dhaqameed waxayna toogteen todobo kale maalintii Isniinta ahayd,” ayuu ku daray Nuur Cabdulaahi.
Maleeshiyada ayaa hawada ka saartay isgaarsiintii deegaanka sida ay sheegayaan wararka.